တာလီဘန်က မကြာမီ အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းမည်ဟု ပြောကြား - Xinhua News Agency
ကဘူးလ် ၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်များသည် အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာက စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Kandahar ပြည်နယ်တွင် လူမြင်ကွင်းတွင်တွေ့ရခဲသည့် တာလီဘန်အုပ်စု၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် Mullah Haibatullah Akhundzada က ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ယူကာ အခြားသော တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းဖော်ပြမှုအရ သိရသည်။
တာလီဘန် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Zabihullah Mujahid က အစိုးရသစ်သည် အာဖဂန်နိုင်ငံသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်မှုကို အခြေခံထားသော အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Taliban says new government to be formed soon: Local media
KABUL, Sept. 1 (Xinhua) — Taliban leaders have ended talks on the formation ofanew government, local media reported Wednesday.
The formation of the new government was discussed atameeting of Taliban leaders chaired by the group’s elusive supreme leader Mullah Haibatullah Akhundzada in the southern Kandahar provinceacouple of days ago, according to the report.
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said last week that the new administration would beabroad-based government representing all Afghans. Enditem
Photo – A Taliban member checksavehicle atasecurity checkpoint in Jalalabad, capital of Nangarhar province, Afghanistan, Aug. 31, 2021. (Photo by Hamedullah/Xinhua)